ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2017
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတွင်အလုပ်များ - Kingdom Saudi Arabia ရှိကုမ္ပဏီများ၏စာရင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2017
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေးဟုတ်တယ်နော် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတူစကားပြောရိုးရိုးပါပဲ။ ကြှနျုပျတို့မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ရှာတွေ့မှအမှုဆောင်အရာရှိကူညီပေးနေ။ သငျသညျဒူဘိုင်းအများအပြားငှားရမ်းရှာဖွေစုဆောင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ရှိအအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများအပြားကောင်းသောရှိပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းတွေ.
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေးရဖို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေနေကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ကမှတဆင့်ရှာဖွေအလုပ်အကိုင်အလုပျနိုငျ ပြည့်စုံအလည်အပတ်ဗီဇာအစီအစဉ်ကို တစ်ဦးအစိုးရများကုမ္ပဏီများအတွင်းပိုင်းသင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏။ ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဂိမ်း changer သတင်းအချက်အလက်များကို။ ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းအစိုးရကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
လျှောက်ထား၏ယူအေအီး Worth အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ !.
ဂျော့ဘ်အတွက် အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများမှ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
နိုင်ငံတကာရေနံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ (IPIC) တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ဤကုမ္ပဏီအဘူဒါဘီ၏အစိုးရအားဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီကရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီကဒီအသေးစိတ် အံ့သြဖွယ်ဒူဘိုင်း 1984 အတွက် Emiri အမိန့်မှကုမ္ပဏီ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတကမ္ဘာလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တူညီသောလက္ခဏာသက်သေ IPIC ပျပိုငျခှငျ့အားဖြင့် စွမ်းအင်နှင့်စွမ်းအင်-related စက်မှုလုပ်ငန်းများဈေးကွက်ထဲမှာ.
ဒီယူအေအီးတှငျစစျမှနျသောအစိုးရကုမ္ပဏီများမှဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ အခြားကုမ္ပဏီတွေကကုမ္ပဏီ IPIC စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရှယ်ယာ 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, ကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သခန့်အပ် ဒူဘိုင်းတွင်အဖွဲ့ဝင် IPIC အတွက်ကြီးထွားဖို့ရှာဖွေနေကြသူဒါရိုက်တာက၎င်း၏ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အဘူဒါဘီ။ ယင်း၏ရာစုနှစ်များစွာကျော်, တစ်ချိန်တည်းမှာ, IPIC အဘူဒါဘီ၏အစိုးရအနေဖြင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရှယ်ယာပံ့ပိုးမှုများကိုကထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ကုမ္ပဏီယခုအခါယခု MUBADALA အမည်ကိုရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းကုမ္ပဏီမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ကြီးမားသောရှိသည်။ သူတို့ကယခု Mubadala မှာအလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာရေနံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျော်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ ၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစျေးကွက်ကျော်ကြီးထွားလာ. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခရီးစီမံခန့်ခွဲအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်အလုပ်သမားများက။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, သင်ကကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖြုန်းအချိန်ကိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူတိုင်းအဆင့်ပေါ်တွင်သင်ကြီးထွားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သော Mubadala အဖြစ်ရေနံနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကိုစတင်တူသောဘာအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - Mubadala သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသောအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလူငယ်တစ်ဦးနှင့်ကြီးထွားလာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီ၏တဦးတည်းဖြစ်သွားသတိရဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ အကောင်းဆုံးနှင့်ထိပ်တန်း 2019 အတွက်ကုမ္ပဏီ rated။ ဤအမှုအလုံးစုံအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအဘူဒါဘီအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဦးဆောင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား သင်တစ်ဦးအလုပ်ရနိုင်ကြသည် သူတို့နှင့်အတူသာအခါသင် CV ကိုရေးသားခြင်းဟာပေါင်းစပ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အပြုသဘောဘက်တွင် တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေသူတစ်ဦးချင်းစီကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းအသစ်ကသမ္မတလောင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
တကယ်တော့ကုမ္ပဏီလေ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုး။ ရန်တိုင်းအသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအဓိကအခွက်တဆယ်ဖြစ်လာ.
ဥပမာအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဝန်ထမ်းအတွင်း၌အလုပ်အကိုင်ဆက်သွယ်ရေးယုံကြည်သင့်ပါတယ် အမြဲအိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖွင့်ဖြစ်.
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ, ကျွမ်းကျင်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုသမာဓိရှိနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်။ အဆိုပါနေ့စဉ်တာဝန်အသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလမ်းညွှန်တစ်ဦးသော့ချက်တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကိုညွှန်ပြရန် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအံ့သြဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒီကုမ္ပဏီစည်းကမ်းမှာမိန်းမောတွေဝေနှစ်ဦးစလုံးသည်နှင့် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူဆန်းသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အားလုံးပြီးနောက်အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အခြားအာရှကလူ။ သစ်တစ်ခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဤကုမ္ပဏီ join ဖို့အကြံပေး။ Correspondingly ဒီအဖှဲ့အစညျးနှငျ့သငျသညျကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အဘူဒါဘီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်စီနှင့်အတူဂျော့ဘ်, ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲရုံစီမံခန့်ခွဲမှုထက်န်ထမ်းယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အမှန်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ။ အတူတူကတခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများနှင့်, ကျယ်ပြန့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ဒူဘိုင်းအတွက်အနည်းငယ်ရုံးများနှင့်အတူဒွန်တွဲ။ အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကိုရာထူး၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ အလင်းတော်၌ စော်ဘွားကုမ္ပဏီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများများအတွက်မြျှောအပေါ်အမြဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်၎င်းတို့၏အသင်းဝင်ရောက်ဤမျှလောက်များစွာသောဝါရင့်ပညာရှင်များရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအမြန်စတင်နိုင်ရန်ဒါလွယ်ကူသည်မဟုတ် ဒီအဘူဒါဘီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ဒီကုမ္ပဏီအတွက်နယူး Developers ကြိုဆိုကြသည်, ထိုကုမ္ပဏီအလွန်ကောင်းသောရှိပါတယ် ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင် အဘူဒါဘီ, အလုပ်ရှာဖွေရေးထဲတွင် port အတွက်ကောင်းစွာအဘူဒါဘီ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာနှစ်ပေါင်းလူသိများခဲ့ကြသည်။ တိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း 2010 ကတည်းကဆိပ်ကမ်းများယဉ်ကျေးမှုလူတန်းစားအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ကို စီမံကိန်းကို developer များစုဆောင်းဖို့ဆက်လက် အဘူဒါဘီအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအပေါ်တစ်ဦးအာရုံအတူ။
အဘူဒါဘီအတွက်နိုင်ငံသားနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကိုကြိုဆိုကြောင်းအံ့သြဖွယ်အရာ။ တစ်စော်ဘွားကော်ပိုရိတ်ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့အလယ်ပိုင်းများအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဝိညာဉ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကြိုးစားကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ ကျင့်ဝတ်အလုပ်လုပ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အဘူဒါဘီအလုပ်ဈေးကွက်အတွင်းအစာရှောင်-ပွေးညီသေးဖော်ရွေပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။ အခြေခံကမ်းလှမ်းမှုကိုစာရင်းပြုကောင်းလုပ်ခသေချာကောင်းသောအကျိုးအစီအစဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကုမ္ပဏီအတွင်းအလုပ်အကိုင်သူတို့ကို join ပါလိမ့်မယ်သူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး။ အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းကို Join ကျေးဇူးပြု. လက်ရှိနေရာလွတ်ဘို့အဖှဲ့အစညျး.
အဘူဒါဘီ Terminal (ADT) တွင်အလုပ်အကိုင်
အဘူဒါဘီ Terminal (ADT) ရှိသေချာဖြစ် အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီအတွက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် Khalifa ဆိပ်ကမ်းနှင့် HR မန်နေဂျာများလည်ပတ် ကွန်တိန်နာ Terminal နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့ကိုစုဆောင်း။ သူတို့အခွအေနမြေားအောက်, အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီအမ်းမရိတ်အတွက်အများဆုံးနည်းပညာအဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်း၏တဦးတည်းနှင့်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးများထဲမှ running ။
ဤအကြောင်းကြောင့်, port ကိုတရားဝင်ဒီဇင်ဘာလ 2012 အတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းတစ်ဦးပုဂ္ဂလိက Joint Stock Company မှဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ, ဒီအစိုးရ ဆိပ်ကမ်းကိုအဘူဒါဘီအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကပိုင်ဆိုင်သည် နှင့်အနည်းငယ်အခြားသူများကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေအခြေခံအဆောက်အဦများမိတ်ဖက်။
အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီမှ၎င်း၏ဝန်ထမ်း access ကိုပေးသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာစျေးကွက်၏တဦးတည်း။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်, တိုင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရတဲ့အတူလုပ်ကိုင် ယူအေအီးအတွက်ထူးချွန်။ ဒီဆိပ်ကမ်းကိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူအနှစ်သာရအတွက်, သင်ကကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆိပ်ကမ်းကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်စရာအခြေခံအဆောက်အအုံ join ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သင်လုပ်နိုင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ဤကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်.
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - အဘူဒါဘီဆိပ်ကမ်းကုမ္ပဏီ.
အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီအဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ ဤအချက်များ, ဒီပေးထား အစိုးရကုမ္ပဏီတစ်ဦးကြိုးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေး အရှေ့အလယ်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲမှာ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာနေသောဤမျှလောက်များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ်။ အဖြစ်အဆင့်မြင့် rated အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီငှားရမ်းအမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီများကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း, သင်ကသူတို့ရဲ့ website သို့ရက်နေ့တွင်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့အပြည့်အဝအလားအလာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်စကားပြော အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ဖို့သင်ကူညီ အဘူဒါဘီအတွက်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၏။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအပြေးတစ်ဦးအပေါ်များမှာ စွမ်းဆောင်ရည်-မောင်းနှင်သည့်စနစ်။ အခြိနျမှနျမှသင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအမှုဆောင်အရာရှိရာထူးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လူတွေပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ကြောင့်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း တစ်ဦးကြိုးအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒီကုမ္ပဏီအတွင်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းမှ, ထိုရေနံကုမ္ပဏီ join တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ပေးထားသောဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးချင်းစီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူဘို့မိမိတို့အပြည့်အဝအလားအလာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အခွင့်အလမ်း အဘူဒါဘီ၌တည်၏။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီကလူကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသတ်မှတ် expats ။ ဤအချက်များပေးသော, ကျွမ်းကျင်သူများကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကြောင်းရေနံကုမ္ပဏီအတွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဘူဒါဘီအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုစကားပြော။ အဘူဒါဘီ၌ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖှဲ့အစညျးနှငျ့ရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းချဉ်းကပ်တာကြောင့်အခြားသောလမ်းထားရန်, ပေးနိုင်ပါတယ် ယူအေအီးဖွံ့ဖြိုးရေး.
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - အမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီသင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအာရပ် Media Group သို့
သင်တစ်ဦးအလုပ်သုတသေနပွုသညျ့အခါမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအာရပ် Media Group သို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ MBA ဘွဲ့ရတစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ထွက်ထောက်ပြရန်။ ဒီ Media Group သို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူသင်အကောင်းဆုံးများထဲမှရနိုင်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အဆော်ဒီအာရေဗျဒေသအတွက်ကမ်းလှမ်း။ ထိုကိစ္စတွင်ဦးဆောင်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလာပြီ။ လက်ရှိတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာရေဒီယိုအသံလွှင့်မှုအတွက်သူကားအဘယ်သူစုဆောင်းနေသည် ?. ဒါဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မိသားစုဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်အတွက်အငယ်တန်းဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များရှာနေကုမ္ပဏီ ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အကျိုးဆက်အားအာရပ် Media Group သို့ (AMG က) တစ်ဦးဒူဘိုင်းလူသိများတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအာရပ် Media Group သို့အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီအတွင်းရှယ်ယာရှိသည်သောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးအခြေစိုက်မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့်, ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီ က join ဖို့တကယ်ပဲထိုက်သည်စော်ဘွားတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖွင့်။ အခုအချိန်မှာ သူတို့က website တွင်အနည်းငယ်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုများ.
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် AMG ကဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပရှိအလုပ်အကိုင်အပါဝငျ။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကုမ္ပဏီတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင် system ကိုပေါင်းစည်း။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ရှာနေလျှင်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီအနှစ်ချုပ်ဖို့ကောင်းလှ၏။ ကျိန်းသေ, သငျသညျကို Global ကျေးရွာအတွင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့အာရပ် Media Group သို့ဒီတော့ဒူဘိုင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ရှိနေခြင်းရှိပါတယ်မတ်လ 2005 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအာရပ် Media Group သို့၎င်းအံ့သြဖွယ်ရှိပြီး အတော်လေးကြီးမားတဲ့လုပ်သားအင်အား ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကု၏။
အကျဉ်းချုပ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဆင့်မြင့် rated အမှုဆောင်အရာရှိ၌တည်၏။ 320 ဝန်ထမ်းများအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ။ ဒါဟာသုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ရုံးခွဲများကိုဖြတ်ပြီးငှားရမ်းထားသည်။ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းလေဆိပ်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
ဒါမန်တက်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အဆက်မပြတ်အလယ်တန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမှအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအရည်အချင်းပြည့်မီ။ နှောင့်နှေးကုမ္ပဏီအာမခံ orientated ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာနေစရာမလိုဘဲ။ ထဲမှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလယ်စင်တာသငျသညျဒါမန်အာမခံကုမ္ပဏီနှင့်အတူတစ်ဦးအနေအထားလျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ အချိန်အတောအတွင်း, သင် CV ကိုတစ်ဦးအတွေ့အကြုံကောင်းရှိပါက သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာယေဘုယျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလယ်ယာတန်ဖိုးရှိသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါမန်ကုမ္ပဏီကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်ထိပ်တန်းအထူးကုဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူရိုးရိုးမိုဘိုင်းဖုန်း application ကိုဒေါင်းလုတ်အားဖြင့်သူတို့ကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ ၏ဘာမျှမပြော အစိုးရဆက်သွယ်မှု အဘူဒါဘီအတွက်ကုမ္ပဏီဒါဒီအဖွဲ့အစည်းကလုပ်ကိုင်ဖို့လုံခြုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒါမန်အာမခံမေလ 2006 ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တန်ဖိုးရှိကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသူတို့ 1100 န်ထမ်းကိုကျော်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်မိုက်ကယ် Bitzer များအတွက် Google ဒါမန်၏ CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ်ကြိုးစားကြ LinkedIn အပေါ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့.
ဒါမန်ကျန်းမာရေးအာမခံတစ်ခုအကွာအဝေးကမ်းလှမ်းနောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ဒူဘိုင်း City နှင့်ပင်လယ်ကွေ့ကျော်ရာထူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါသင်ကဆက်ပြောသည်ဆုကြေးငွေနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်လုပ်ခအစီအစဉ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ကုမ္ပဏီအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန်ပထဝီလွှမ်းခြုံထားသည် ဒါကြောင့်သင်ယူအေအီးထဲမှာမယ့်အလုပ်လုပ်နိုင်.
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒါမန်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Drop.
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု။ ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီကသူတို့အဖွဲ့ကပူးပေါင်းမည်သူတစ်ဦးချင်းစီသစ်ကိုဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အထူးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပန်းခြံများတည်ဆောက်။ သင်တန်း၏, ကုမ္ပဏီ အံ့သြဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖွံ့ဖြိုး နှင့်ထိပ်တန်း rated နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်လူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကဏ္ဍအပေါ်အဓိကထားတဲ့အစုစုကိုစီမံခန့်ခွဲ။
ကျိန်းသေ, သင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်သုတေသနသည့်အခါ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရနိုင် သူတို့နှင့်အတူ။ အတူတူအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်နဲ့ဧညျ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ သို့သော်ငြားလည်း, ဆက်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလည်း join ဖို့ကြိုဆိုကြသည် ဒူဘိုင်း Holding ။
အားလုံးဒူဘိုင်းကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအထက်တွင် 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဦးပိုင် 12-14 နိုင်ငံများရှိစစ်ဆင်ရေးထုတ်ပေးနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ 25,000 လူမျိုးကိုစိုးအလုပ်သမား။ ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီ 16.8 ဘီလီယံ AED စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ဆိုင်မှု၏ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ 130 ဘီလီယံခန့်တွင်လည်း။ 6.3 Billon အသားတင်အမြတ် AED ။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်း Holding ကုမ္ပဏီသင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
ဒူဘိုင်းကအင်တာနက်စီးတီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောစီမံကိန်းများကိုဖြစ်ပေါ်နေသောနေဆဲဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်အင်တာနက်စီးတီး supporting, စကားပြော GCC နိုင်ငံများတလွှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရ။ ရေရှည်မှာမှာတော့ဒူဘိုင်းအင်တာနက်ကိုစီးတီးပန်းခြံအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအမှတ်တံဆိပ်ကိုဆွဲဆောင်။ ထိုအခါဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းပိုင်းတကယ်တော့ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများတဲ့ကိစ္စအဖြစ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းမှတက်နှင့်အင်တာနက်စီးတီးများအတွက်အဆင်သင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကကို ကကျွမ်းကျင်သူများရဖို့ရှာဖွေနေဘာလဲ.
ဤစကားမှန်ဒူဘိုင်းအင်တာနက်ကစီးတီးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ ရှိပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကုမ္ပဏီဟိုတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏နောကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးဖန်တီးထားသည်။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအလိုတော်အတွက် လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ကြီးထွား အထူးသဖြင့်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ပေါ်မှာ။ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းအင်တာနက်ကိုစီးတီးသင်၏လျှောက်လွှာ Upload လုပ်ပါ.
ဒူဘိုင်းအသိပညာ Park မှာဂျော့ဘ်
ဒူဘိုင်းအသိပညာပန်းခြံသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကောင်းကောင်းသိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရှာအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီနှင့်ဒူဘိုင်းအင်တာနက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုထံအပ်နှံတစ်ခုတည်းသောအခမဲ့ဇုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ပြဖို့ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်စာချုပ်လက်ခံရရှိ အင်တာနက်ကိုစီးတီး။ သူတို့အခွအေနမြေားစော်ဘွားသစ်ပြည်ပရှိသင်ယူမှုထူးချွန်၏တစ်ဦးချင်းစီလက်အောက်တွင်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီ TECOM Group ၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် 2003 အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ဒူဘိုင်းအသိပညာပန်းခြံ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကမ်းလှမ်း စီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံ။ ဤအချက်များအားကုမ္ပဏီအသစ်ကအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း-ဖော်ရွေသည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းစည်းမျဉ်းများအဘို့နှင့် ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်း၌တိုးချဲ့ထောက်ခံမှုကွန်ယက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှလုံးဖြစ်ပါသည်.
ဒူဘိုင်းအသိပညာ Park ကစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကထိပ်တန်း rated ကော်ပိုရေးရှင်းတို့တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, DKP အသစ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်၏သင်တန်းအသစ်ကစတင်အတှကျအသုံးပွုခံရဖို့အဆင်သင့် 1 သန်းစတုရန်းပေ၏ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒီစင်ကြယ်သောလုပ်ငန်းတထောင်စတုရန်းမီတာစစ်မှန်တဲ့ 95,2 ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ဤမျှလောက်များစွာသောအံ့သြဖွယ်ယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ် စွန်ပလွံ Jumeirah, ထိုစော်ဘွား၏ Mall, စော်ဘွားတောင်တန်းများနှင့်ဒူဘိုင်းရှိ Marina အနီးတွင်တည်ရှိပြီး။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိသေး၏ အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload တင်ပေးရန် ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းအသိပညာ Park ကသင်၏ CV ကို Upload လုပ်ပါ.
ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီး (DMC) ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီအံ့သြဖွယ်အဖွဲ့အစည်းကစကားပြော။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီး အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည် 2000။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, DMC စော်ဘွားနှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဓိကရူပါရုံကိုဒူဘိုင်းမီဒီယာစင်တာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ရေးအထူးကုရှာဖွေနေ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေကြသူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှပြည်တော်ပြန်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီးကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာသည်။
DMC အဖွင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတည်းကမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ ဒူဘိုင်းအတွက်မြေတပြင်လုံးမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်နေတဲ့မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ် 2000 ကတည်းကပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤသည်နေ့ရက်သည်ရဲ့ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အလုပ်အကိုင်များအတော်လေးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီးနှင့်အတူမှတ်မိလွယ်တဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်ဂီတကဏ္ဍများအတွက်အပြုသဘောဘက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်။ ထို့အပြင်မီဒီယာသစ်အလုပ်အကိုင်များအတူ။ အတူတူ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ။ အသံလွှင့်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းရုပ်ရှင်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီများနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်ယခုစုဆောင်း။
ဒီဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီးတှငျစစျမှနျသောအလုပ်ရှာဖွေရေးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်တာများ။ ဒါ့အပြင်လှူဒါန်းခဲ့သည်အများအပြားဖန်တီးဖူး သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုငျသောစီမံကိန်းများကို။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ CV ကိုမြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ ပါရမီ HR မန်နေဂျာများ, သင်၏အလုပ်အကိုင်အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပဲ။ အမှန်တကယ်, ဒေသတွင်း၌စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းအလွန်အမင်းသင့်လျော်ဖြစ်ပါသည် သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်။ ထည့်မပြောပါနှင့် အသစ်သောအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူပစ်မှတ်ထားနေသောဒူဘိုင်းမီဒီယာစီးတီး၏ထူးခြားသောအဆောက်အဦ။
သင်အလုပ်လက်မဲ့လူတစ်ဦးသောဖြစ်ရပ်၌တည်၏။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီ, ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားသည် အလုပ်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ဒါကြောင့်အခြားဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားထားရန်တစ်ဦးချင်းစီအသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဒူဘိုင်းအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တိုးတက်မှုနှုန်းဒေသများပို့ဆောင်ရေး & ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများပါဝင်သည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အထူးသဖြင့် သင်အလွယ်တကူအသစ်ကအလုပ်အကိုင်စတင်နိုင်ပါသည် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Drydocks & ရေကြောင်းပေါ်မှာ။ ထို့အပွငျအတော်လေးကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနှင့်အတူပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွင်, ဆက်စပ်ရာထူးရရန်အလွန်ခဲယဉ်းဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအင်တာဗျူးဘဏ္ဍာရေးရာထူးများအတွက်သွားအတော်လေးကြမ်းတမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သိသိသာသာဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအစုစုကိုနေ့တိုင်းကြီးထွားလာ။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံနိုင်သည်ရှိရာ၎င်းတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများသည်အချို့ပါဝင်သည်။ ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအားကြီးသောအစုစုဖြစ်ပါသည်ကြိုးစားရန်ထိုက်တန်ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပါအဝင်စကားပြောသို့မဟုတ်ပင် LinkedIn မှာသူတို့ကိုညွှန်ပြတဲ့စမတ်ဖြစ်ပါသည် ပါကစ္စတန်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်လမ်း.
ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုချောမွေ့ဖို့မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်း၏အမာခံလှုပ်ရှားမှုများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေသူတို့ကိုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှင့် Worldwide မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူရှေ့သို့ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားသင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
အနာဂတ်မှာဒူဘိုင်းလေဆိပ်အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူစတင်သည်။ ဒူဘိုင်းလေဆိပ်များတွင်ဂျော့ဘ် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ငွေရှာဖို့အလွန်ကောင်းသောလမ်း။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သင်တို့အဘို့အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများရှိခြင်း။ သငျသညျ Uber ယာဉ်မောင်းအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ပါသည် ဒါမှမဟုတ်အရောင်းအလုပ်အမှုဆောင်။ ဒါမှမဟုတ်သင်လေ့ကျင့်ရေးမန်နေဂျာနိုင်ပါတယ်နှင့်အကြီးတန်းမန်နေဂျာရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းရှိလော့။ ဒီလက်ငင်းမှာဒူဘိုင်းလေဆိပ်ဒူဘိုင်းစီးတီး်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မူလတန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် မင်းဟာဖြစ်လာ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများ၏မာနထောင်လွှားအသုံးပြုသူ။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းလေဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အလာပြီလည်းသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်သည်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်အလုပ်များလေဆိပ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အခြိနျမှနျမှသင်သည်သူတို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသည်တင် loge အပေါ်ကျော်ကြားအမှုဆောင်အရာရှိရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
foreground ကဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားဗဟို-အယ်လ် Maktoum အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်း။ ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုကိုအံ့သြဖွယ်တကယ်တော့။ ထဲမှာ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးစင်တာ အာရှတိုက်မှာဒုတိယအများဆုံးလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှတက်နှစ်စဉ်စုစုပေါင်း (85,654,250) ခရီးသည်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ဒူဘိုင်းလေဆိပ်သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
ဒူဘိုင်းမြေယာဌာနစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ယူအေအီးနိုင်ငံကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုမြေယာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒေသခံအမျိုးသားရေးအဘို့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများ။ လူတိုင်းအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်လျောက်ပတ်သောလူနေမှုစေသည်။ ဤသည်ဒူဘိုင်းမြေယာဦးစီးဌာနအပျနှံဖွင့်လှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်တံခါးများ။ ဒူဘိုင်းမြေယာစီမံခန့်ခွဲမယ့်ဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦးရှိပါသည်။ ဤသည်အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အအောင်မြင်မှု၏မကြုံစဖူးအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိ နှင့်အဘူဒါဘီ။
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, အိန္ဒိယကနေတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည် ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ရှာနေအမှုဆောင်အရာရှိခေါင်းဆောင်များနှင့် တောင်အာဖရိကဆီကနေဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောလူ။ အဘယ်သူသည်ဤမွတ်စ်လင်ပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ join ချင်ပါတယ် ?. 2000 သစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဒူဘိုင်းမှလာမယ့်ကတည်းက။ ထိုအသစ်သောဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများအမ်းမရိတ်အတွက်အဆင့်မြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြေယာဦးစီးဌာနနှင့်အတူသငျသညျစီမံကိန်းကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးရာထူးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါနောက်ခံ, သင်ကျော်လွန်ထက်ဝေးတိုးနိုင်ပါတယ်။ ရှည်လျားသောအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းမြေယာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုကို run ။ Will ကျိန်းသေပိုပြီးအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုဖန်တီး.
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - အစိုးရဂျော့ဘ်အတွက်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
နှင့်အတူအခွင့်အလမ်းများကို Explore စော်ဘွား Group မှ Careers။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် Emirates အုပ်စုသည် ၀ င်ငွေကောင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည် အလုပ်အကိုင်များခွင့်အလမ်းများနှင့်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့, စကားပြောသည့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Group မှအကုန်အစင်ဒူဘိုင်း၏အစိုးရကပိုင်ဆိုင်သည်မှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၏တကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်ပိုရေးရှင်း၏ကိစ္စအဖြစ် ဒူဘိုင်းကအမြဲအသစ်အန်ထမ်းများအတွက်ရှာဖွေနေ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သူတို့၏လေယာဉ်မှူးရဲ့အမှုထမ်းလာရောက်ပူးပေါင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှာနေရှိမရှိ။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရတဲ့အင်ဂျင်နီယာအနေအထားအတွက်စမတ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါသည်။ မှာထိုအတောအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်အမျိုးသားရေးရှာဖွေ Emirates ။ စော်ဘွား Group မှအလုပ်ရှာဖွေရေးအဓိကအားဖြင့်ယူအေအီးနိုင်ငံသားများအဘို့အစုဆောင်းရေးနှင့် headhunting ထံအပ်နှံ။ သို့သျောလညျး သငျသညျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူလျှင် နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲစော်ဘွားရန်သင့် application upload ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တကအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။ ခြောက်လတိုက်ကြီးအနှံ့ 150 နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 83 မြို့ရွာတို့အဘို့။ သငျသညျကျိန်းသေနိုင် စော်ဘွားနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးရိုးရှင်းတဲ့အဆက်အသွယ် HR မန်နေဂျာများဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုချဉ်းကပ်။
၏ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကအမြဲဒူဘိုင်းအစိုးရအစဉ်အမြဲကိုအဖြစ်လမ်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားဖို့ကူညီပေးနေ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အမြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွန်းအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လျှင်ဒူဘိုင်းတော်ဝင် Familly မှသစ္စာရှိမှုတစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖို့ကတိကဝတ်မှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ စော်ဘွားနှင့်အတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူမြင့်တက်သည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည် အစာရှောင်လမ်းနှင့်အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ENOC - စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းမှု ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို၏ကျယ်ပြန့။ တနည်းအားဖြင့်သင်တို့သည်အားကြီးသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအကွာအဝေးရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ စော်ဘွားရေနံကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့်၎င်း၏ဖြစ်ပါသည် ခိုင်မာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွဲ့စည်းပုံများ။ ENOC ကုမ္ပဏီအသိအမြင်အတွက်ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်အတူလူ့မြို့တော်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်တကွ, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအမျိုးသားရေနံကုမ္ပဏီကြီးထွားလာစီးပွားရေးနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 21st ရာစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြံပေးနှင့်အခြိနျမှနျမှဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ရုံးချုပ်သွားရောက်လည်ပတ်။
စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကသူတို့အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်။ ရှင်းမှ, သူတို့ကအမြဲ ENOC အသစ်ကျွမ်းကျင်သူများကြိုဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရည်ရွယ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်းတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအားပေး။ ကုမ္ပဏီတလျှောက်လုံးအခြားကုမ္ပဏီများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုမှဆန့်ကျင်ဘက်အချိန်ကြာပါတယ်။ ထိပ်တွင်, ထို Enoc ဒူဘိုင်းရေးစင်တာ၌ကောင်းသောအခွက်တဆယ်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေးထားပြီးလျှင်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ENOC သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
စော်ဘွား Post ကိုအတွက်ဂျော့ဘ်
နောက်ခံစော်ဘွားမှာ Post အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုများအတွက်တရားဝင်စာတိုက်အော်ပရေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအစိုးရ Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသြဂုတ်လ 19, 1909 အပေါ်ဖြန့်ချိခဲ့ကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီ 1947 အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးသည်အထိအိန္ဒိယစာတိုက်န်ဆောင်မှုများကစီမံခန့်ခွဲစတင်ဖို့။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ် သငျသညျမှတျပုံတငျနိုင်ပါတယ်ရှိရာထူးခြားသောအလုပ် portal site တခု။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သငျသညျသူတို့ထံမှအလုပ်သတိပေးချက်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - စော်ဘွား Post ကို Group မှသင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
အဘူဒါဘီအတွက် Etihad လေကြောင်းလိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
အံ့သြဖွယ် Etihad လေကြောင်းလိုင်းအဘူဒါဘီအတွက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော၏ဦးခေါင်းသည်။ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ Etihad လေကြောင်းလိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း - ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီကုမ္ပဏီသူတို့ပဲစော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းအပြီးဖြစ်ကြောင်းယူအေအီး၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလိုပါလျှင် ဟိုတယ်တွင်လည်းသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန် သူတို့နှင့်အတူ။ သငျသညျဦးခေါငျးကိုရုံးအဘူဒါဘီနိုင်ငံတကာလေဆိပ်အနီးရှိ Khalifa ကိုစီးတီး, အဘူဒါဘီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိဖို့သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် LinkedIn အပေါ် HR မန်နေဂျာကိုရှာဖွေသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်.
သူတို့အခွအေနမြေိုး, Etihad နိုဝင်ဘာလ 2003 ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. သူတို့အဘူဒါဘီမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများသည်အကြားမပေါက်ပါဘူး။ လေကြောင်းလိုင်းစာရင်းပြုဖို့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ၏တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတစ်ပတ်ကို 1,000 ပျံသန်းမှုထက်ပိုမိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ Etihad လေကြောင်းလိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာဖရိက, ဥရောပ, အာရှ, သြစတြေးလျနှင့်အမေရိကတိုက်ကြီးအတွက် 120 ခရီးသည်နှင့်ကုန်တင်ခရီးစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကူညီပေးနေ။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - ETIHAD သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နောက်ထပ် key ကိုကုမ္ပဏီ Fly ဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Fly ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အသတိပေးချက်အဘို့အ sign up ကိုပေးနိုင်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူတို့ရဲ့အခွက်တဆယ်အဝန်း၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ သငျသညျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဆင့်ဆင့်အတွင်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ FlyDubai နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကြိုးစားပါ။ နှင့် ပင်လုံခြုံရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အသတိပေးချက်အဘို့သင့်အသေးစိတျကိုထည့်သွင်း။ သင်ကုမ္ပဏီ join အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်အမြဲတမ်းဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုသိပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအထက်, flydubai သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်တို့အဘို့ရှာကြသည်သောအရာကိုအနေအထား။ ဒါကအလုပ် site ကိုသင်ကူညီစေခြင်းငှါ။ HR, စျေးကွက်နှင့်အထွေထွေဝန်ထမ်းများအတွက်စုဆောင်းကုမ္ပဏီ။
အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်စိတ်ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၌ဤအတူ။ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းရွေ့လျား FlyDubai အတွက်ဂျော့ဘ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီကြောင်းသဘောပေါက် အိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်သူများကလူကောင်းသောအလုပျသမားများမှာ။ နှင့်ဥရောပအရေးအပါဆုံးကစားသမားဘဖှံ့ဖွိုးတိုးတပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီအတွင်းသူတို့၏အပြည့်အဝအလားအလာရရှိစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တစ်ဦးသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး - FlyDubai သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် - DXB လေဆိပ်
ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ယခုသင်သည်သူတို့၏ updated website တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်, ကသူတို့ရဲ့ website သို့ updated သိရသည်။ အဲဒီမှာသင်လေဆိပ်ကျော်အပေါ်ကားများနှင့်ဘွတ်ကင်ဟိုတယ်များငှားရမ်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားလမ်းပြရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
KIZAD နှင့်အတူနယူးအခွင့်အလမ်းများ။ ကုမ္ပဏီစတင်ကြောင်းအနည်းငယ်စီမံကိန်းများကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်ဒေသခံဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် Automotive အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်ပရှိခွက်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, KIZAD အဘူဒါဘီ၌အသစ်သောစီမံကိန်းများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်အသိပညာစီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်။ ဒီရေရှည်တှငျစစျမှနျသောဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ KIZAD ကုမ္ပဏီရူပါရုံကိုအဘူဒါဘီရဲ့တကမ္ဘာလုံးယှဉ်ပြိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း generate နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။
အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း Kizad ။ အထူးသဖြင့် အသစ်ကပိုလတ်ဆတ်များအတွက်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး။ KIZAD သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ.
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက် DP ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်ဂျော့ဘ်
အတူတူနဲ့အခြားအစိုးရများကုမ္ပဏီများနှင့်။ DP ကမ္ဘာ့ဖလားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ဦးဦးဆောင်ဂိမ်း changer ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်ကုမ္ပဏီလည်းအစိုးရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများအတွက်အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားရပေးနိုင်ပါတယ်။ DP ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအမြန်လမ်း။ ထိုအခါအပြုသဘောဘက်မှကုမ္ပဏီအပေါ်အမြဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းအပြင်သေချာပါစေ။ အဲဒီကုန်တင်ဝန်ထမ်းအကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အထိတက်လတ်ဆတ်တဲ့န်ထမ်းများပြောင်းရွှေ့စောင့်ရှောက်။
DP ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေကြသူလူများအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အချက်။ လူတွေကသူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အထဲမှာရာထူးတိုးရနျလိုအပျသောအရာတို့ကိုရှိသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ သစ်တစ်ခု Philipino လုပ်သားအဖြစ်သငျသညျကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။ ယူအေအီးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွင်းဆက်အတွက်ကျိန်းသေအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ DP ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းကူညီပေးသည်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် စီးပွားရေးကြီးထွားလာ နိုင်ငံသားများရာထူးအတွင်း။
သူတို့အခွအေနမြေိုးကြောင့်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစားရန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီကုမ္ပဏီစမတ်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အသည်းအသန် လူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်သူများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူများကြောက်လန့်နေကြသည်မဟုတ် ဒူဘိုင်းအတွက်အစိုးရအလုပ်ရှာဖွေရေး join။ ထို့ပြင်အောက်ပါသင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ။
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးပုဂ္ဂလိကငှားရမ်းကော်ပိုရေးရှင်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတွေအများကြီးကြောင်းကဏ္ဍတွင်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးရှိ ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်းအလုပ်ရှာဖွေအင်ဂျင် နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ ရုံရှိသေးလျှောက်လွှာကျဆင်းနေ။ ထက်နည်းနှစ်မိနစ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များပင်လယ်ကွေ့တွင်တလျှောက်လာသောအခါ, သိကြဘူး။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့။